Apple AirPods Pro (With Magsafe) ~ ICT.com.mm
HomeApple AirPods Pro (With Magsafe)
Apple AirPods Pro (With Magsafe)
Active noise cancellation for immersive sound Transparency mode for hearing and connecting with the world around you Three sizes of soft, tapered silicone tips foracustomizable fit Chip: H1 headphone chip... [Learn more]
Brand: AppleFilter by: AirPods, Earbuds, iCare
သင့်ရဲ့ Apple ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Apple AirPods Pro ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာတပ်ဆင်နိုင်အောင် အသေးစိတ်ပြုလုပ်ထားပြီး ဆူညံသံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Seal တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သာမန်နားကြပ်တွေလို သင့်ရဲ့နားကြပ်ကိုပါ ခံစားနားဆင်နေရတာမဟုတ်ဘဲ သင့်ရဲ့သီချင်းသံသီးသန့်ကိုပဲ ခံစားနားဆင်ရစေမှာပါ။ နားကြပ်အသုံးပြုနေစဉ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဘေးကအဖြစ်အပျက်တွေကို နားကြပ်မချွတ်ဘဲ ကြားသိနိုင်စေမဲ့ Transparency Mode ပါဝင်ပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး အဆင်ပြေပြေတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အရွယ်အစားသုံးမျိုးနဲ့ ဆီလီကွန်နားကြပ်ခေါင်းငယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတွေက နားကြပ်ရဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်လုံးက ဖိအားကို ညီမျှနေအောင် ထိန်းသိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်ကျစ်လျစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံမှာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့စပီကာ Driver, အသံအနိမ့်အမြင့် အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Amplifier နဲ့ H1 Chip တို့ကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လုံးဝမကြားဖူးသေးတဲ့ သံစဉ်နဲ့ ဂီတအရသာကို ခံစားနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ AirPods Pro ကိုအားသွင်းဖို့အတွက် ၂၄ နာရီနဲ့အထက်အားပြန်သွင်းပေးနိုင်တဲ့ Wireless Charging Case ပါဝင်တာကြောင့် မိမိသွားလေရာကိုအလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Charging Case ကို Qi-certified Chargers တွေအားလုံးနဲ့ အားပြန်သွင်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ Digital Assistant Siri ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး “Hey Siri” လို့ တခွန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ သင့်ရဲ့ Siri ကို အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှုရှိသလို နားကြပ်ကိုယ်ထည်ကို ချွေးစို၊ ရေစိုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Details of comfort, creatinganew class of in-ear headphones withacustomizable fit that forms an exceptional seal for Active Noise Cancellation. You’ll feel your music, not your headphones.
There are three sizes of silicon tips foracomfortable fit. Vents in the tips keep pressure equalized on both sides of the earbuds.
The wireless Charging Cae keeps you and your AirPods Pro on the go. And it's compatible with Qi-certified chargers.
Is this the real one oraclone ?
Thank you for your time to leavea5 stars review on Apple airpods pro (with Magsafe). To answer your question, we work with industry leaders, credible retail stores and authorised distributors only. Thus, ICT.com.mm can guarantee that all products and services offered on this site are 100% genuine and brand new. You can count on us.